Nabadoon Caan ahaa oo lagu dilay xaafad ka tirsan Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kooxo ku hubeysnaa Bastoolad ayaa barqanimadii Maanta qeyb kamid ah degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir waxaa ay ku dileen Nin Odey ahaa, kana mid ahaa dadka deegaanka degmadaas.
Allaha u naxariistee Nabadoonka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Marxuum Cabdi Siyaad Geeddi oo ka mid ah nabadoona caanka ah ee Soomaaliyeed, isla markaana waxaa la toogtay xili uu ku sugnaa Suuqa Ariga Deyniile.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in Marxuum Cabdi Siyaad Geeddi uu ka mid ahaa ergadii soo xushay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee haatan waqtigiisu sii dhammaanayo.
Ragii hubeysnaa ee toogtay Nabadoonka ayaa si deg deg ah goobta uga baxsaday goobta, isla markaana waxaa markii dambe gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska oo qaaday Meydka, iyadoo la geeyay Xarunta CID-da.
Kooxda Al-Shabaab ayaa had iyo jeer beegsata odaayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, iyada oo horey loo dilay ergay aad u badan oo ka ka qeyb-galay soo xulida xildhibaanada labada aqal ee dowladda Soomaaliya.
Banaanbax xoogan oo hadda ka socda Magaalada Garoowe iyo Rasaas…